Nidaamyada lagu guuleysto roulette
Hababka lagu guuleysto ee roulette-ka ayaa jira, xitaa haddii kuwa run ahaantii shaqeeya ay u badan tahay labo ama seddex oo runti maanta aad ayey u adag tahay in lagu dalbado casino.
Waxaan horey u qoray mid kale oo ku saabsan ku guuleysiga nidaamyada roulette article kaas oo aan kugu martiqaadayo inaad aqriso haddii aad rabto inaad sifiican u fahamto mowduucan.
Sida aad ku aqrin doontid boostada ►nidaamyada si ay ugu guuleystaan ​​at roulette in run ahaantii ka shaqeeya, ka mid ah habab yar oo runtii guul guul roulette mid aad wax ku ool ah ee la soo dhaafay ahaa mid ka mid ah oo ku lug leh ciyaaro at roulette eexasho.
Had iyo jeer waxaa aragti ahaan loo qaatay inaysan jirin shaashad roulette ah oo si farsamaysan u dhammaystiran sidaa darteedna waqti ka dib dhammaantood waxay la kulmi karaan cilado qaybaha qaarkood ama sanduuqyada qaarkood.
Taariikhda roulette waxaa ka buuxa sheekooyin ku saabsan ciyaartoydii daah-furtay cilladahan oo si guul leh uga faa'iideystay si ay u helaan guulo waaweyn.
Qaar ka mid ah dhacdooyinka ugu caansan waxay ku saabsan yihiin qarnigii XNUMX-naad makaanik ingiriis ah oo la magacaabay Yuusuf Jagger, oo ku guuleystay Monte Carlo oo u dhiganta qiyaastii $ 250.000 waqtigaas.
Laba arday oo jaamacadeed, Al Hibbs e Roy Walford, dabayaaqadii 40-yadii waxay ku guuleysteen $ 25.000 at Casino Reno waxayna ku dhowaadeen inay noqdaan caan qaran.
Intii u dhaxeysay 1986 iyo 1989, ciyaaryahan caan ah oo caan ah ayaa loo magacaabay Billy Walters guuleystay in ka badan $ 4 million ee Atlantic City!
Kuwani waxay ahaayeen natiijooyin fantastik ah oo runtii u qalma sumcadda ay soo saareen, mid kasta oo ka mid ah hal-abuurnimadani waxay u baahdeen shaqo diyaargarow weyn.
The kooxaha kala duwan ee clockers qaatay toddobaadyo lagu qoro natiijooyinka wareejin on daraasiin giraangiraha roulette si aad u hesho cilladaha jirka; qMarkii cilad ugu dambayntii la helay, laacibku miiska ayuu fadhiistay oo wuxuu sharad ku sameeyay lambarada eexda 24 saacadood 24, Ilaa hadafkii guusha laga gaadhay, ama ilaa maamulka casino joojiyeen ciyaarta.
Tan iyo dhamaadkii 80-kii wadayaasha casino waxay bilaabeen inay aad u xiiseeyaan cilladaha suurtagalka ah ee roulette, ka hor inta badan inta badan giraangiraha waxay lahaayeen kala-saarayaal sanduuq aad u sarreeya, go'an sidii qaybo shaqsi kuwanna runtii wax badan ayey ka geysteen abuurista cilladaha.
Intii u dhaxeysay 1989 iyo 1991, casinos-ka badankood waxay beddeleen roulettes-kii hore, iyagoo ku beddelay kuwa cusub qaybaha mono ee hooseeya: natiijadu waxay tahay in maanta ay tahay wax aan macquul aheyn hel ama ka faa'iideyso roulette si farsamo ahaan cilladaysan.
Gabagabadii? Ciyaarta ku saabsan roulettes eexda badan casinos maanta ma aha wax macquul ah, si kastaba ha noqotee xaqiiqda ayaa weli ah xirashada (taas oo dhab ahaantii aan u tudhin roulettes internetka) waxay sii wadaa inay sii xumaato roulette waqti ka dib, taasi waa sababta aan u ogaaday bot software ah kaliya si ay ula socdaan roulette online h 24, loogu talagalay dhexda cillad sida ugu dhakhsaha badan ee ay bilaabaan in ay isu muujiyaan.
Waxaan isla markiiba u imid su'aasha ugu dambeysa: laakiin maanta waxaa jira online eexda roulette? Xitaa haddii roulettes casri ah oo ka kooban hal waligood kuu oggolaan doonin inaad ku guuleysato guulaha waaweyn ee la soo dhaafay, weli waxay lahaan karaan cilado yar yar oo xaddidan, oo cabirkoodu xaddidan yahay, laakiin ku filan inay sameeyaan macaash wanaagsan. Xaqiiqdii ma filan kartid inaad fuliso duulaan dhab ah sida kuwa, tusaale ahaan, Isbaanishka ► Gonzalo García Pelayo u horseeday Yurub isaga iyo qoyskiisa horaantii 90-meeyadii.
Gonzalo Garcia Pelayo. Sawir: Jose Ramon Ladra.
Ninka reer Spain ee xun
Gonzalo García Pelayo oo ah soo saaraha rikoorka iyo xiisaha xisaabta, ayaa ku muteystay sumcadiisa guulaha waaweyn ee uu ka soo hooyay ciyaarista qamaarka adduunka oo dhan, ka dib markii uu alifay hab sharci ah inaad ku guuleysato, oo ku saleysan falanqaynta tirakoobka ee isku aadka, si loo aqoonsado tirooyinka aad jeceshahay, sababtoo ah cilladaha roulette.
Habka wuxuu ku saleysnaa xaqiiqda ah in miisaska roulette-ka ay macquul tahay inay leeyihiin cilado farsamo iyo in kuwan waxay abuuraan isbeddel taas oo keenta in tirooyinka qaar ay yeeshaan wax soo saar soo noqnoqda ka sarreeyaa kan teori.
Ka dib markii la soo ururiyey natiijooyinka dhowr kun oo wareejin ah isla markaana la geliyay xogtooda barnaamijka loogu talagalay ujeedkan, Pelayo wuxuu ogaaday in khamaarka casino ee Madrid uu u janjeero inuu u roonaado lambarro gaar ah, taas oo ay runtii ahayd mid mudan in lagu sharfo.
Isaga oo la abaabulay qaar ka mid ah qoyskiisa, wuxuu bilaabay inuu ka ciyaaro Casino Gran Madrid dhammaadkii 1991, isaga oo maareynaya inuu ku guuleysto xagaaga 1992 wax u eg 70 milyan oo pesetas ah oo ku jira khamaarkaas oo keliya!
Nidaamkiisu wuxuu ahaa mid fudud: wuxuu ciyaaray oo kaliya si gaar ah tirooyinka loo arko kuwa ugu cadcad, isagoon ku mashquulin inuu is qarxiyo xeeladiisa.
Maamulka khamaarka Madrid, oo ka shakisan siyaabaha lagu guuleysto, ayaa bilaabay inuu si dhow ula socdo dhaq dhaqaaqiisa ilaa, ka dib guushii ku dhowaad 500.000 pesetas maalin kaliya, waxay ka mamnuuceen Pelayo iyo xubnaha qoyskiisa inay dib u soo galaan. .
Xubnaha qoyska Pelayo waxay markaa bilaabayaan inay u safraan si ay uga ciyaaraan qamaarro kala duwan oo adduunka ah: Las Vegas, Australia, Austria, Denmark, Holland.
Guud ahaan, qoyska García Pelayo waxaa lagu qiyaasaa inay kasbadeen in ka badan 250 milyan oo pesetas ah (1,5 milyan euro maanta), in kastoo wadarta guud aan waligeed la shaacin.
Kiiskiisu sidoo kale wuxuu noqday 10 sano oo dagaal sharci ah Spain.
Sannadkii 2004-tii Maxkamadda Sare ee Isbaanishka waxay ku soo celisay qoyska Pelayo xaquuqda ay ku leeyihiin inay galaan qamaar kasta oo ku yaal Spain oo ka mid ah meeshii horay looga mamnuucay
Dhiirrigelinta xukunka ayaa ahayd "looma qeexi karo qish, haddii laacibku uusan soo faragelin si kasta oo uu saameyn ugu yeesho natiijada ciyaarta".
Sheekada Gonzalo García Pelayo iyo qoyskiisa sidoo kale waxay ahayd mawduuca buugga ► Qisadii Cajiibka Aheyd ee Los Pelayos iyo Breaking Vegas documentary ► Weerarka roulette.
Director Eduard Cortés ayaa Director ka ahaa Filimkan sanadkii 2012 ► Pelayos, dabacsan oo ku saleysan dhacdooyinka dhabta ah ee soo maray qoyska Isbaanishka.
Sida loo ogaado roulette eexda
Weli maadan seexan? Hagaag, maxaa yeelay hadda waxaan kuu sheegayaa wax ku saabsan caqliga ay ku dhisan tahay bot-ka Roulette Bias Sniper.
Shaqadii uu qabtay Pelayo 90-yadii waxay ahayd mid cajiib ah, ugu dambayntiina qof ayaa awooday inuu ka faa'iideysto xirfadahooda xisaabeed iyo kombuyuutar si uu runtii uga helo macaash badan roulette-ka waxaanan ku amaani karaa oo keliya Pelayo wixii uu naqshadeeyay iyo wixii uu dhisay, laakiin wixii ka sarreeya dhammaantiis waxaan ugu mahadcelinayaa inuu haysto si xor ah u wadaagay dhammaan qaybta teori ee qaabkiisa khadka tooska ah.
Haddii aad waxoogaa cilmi baaris ah ku sameyso shabaqa ma ahan inaad dhib badan kala kulanto helitaanka isla nuxurka aan ka tarjumay Ingiriisiga iyo kan aan hoos ku soo sheegayo si aan u bilaabo soo bandhigida mowduuca oo faahfaahsan
Habka asalka ah ee Pelayo
Si loo helo cillad suurtagal ah (eex) roulette, maaddaama aanan u haysan si aan u sameyno cabbiraadaha jireed ee lagama maarmaanka ah, waa inaanfalanqaynta tirakoobka dhaqankiisa.
Waxaa muhiim ah in la caddeeyo in roulette uu leeyahay dabeecad "ka weecata" waxa aan ka filan karno mashiin dhammaystiran iyo, si loo gaaro himiladdan, waa inaan marka hore falanqeyno sida rooti qumman oo aan iin lahayn uu caadi ahaan u dhaqmo (Wheel Random).
Ujeedadaas gaarka ah awgeed Pelayo wuxuu abuuray fikradda ah "hufnaan": Haddii 36 wareejin ka dib ay tiro soo baxdo hal mar oo kaliya, wax qiimo ah oo togan ama taban ku yeelan mayno lacagteenna lacageed, taasi waa, isku dheelitirnaan baa ina haysa, haddii ay soo baxdo laba jeer, waxaan helaynaa wax togan (+1), haddii ay soo baxdo saddex jeer, waxaan lahaan doonnaa laba natiijo (+2), iwm. haddii aysan shaqeynin gabi ahaanba, markaa waxaan leenahay diidmo (-1).
Fadlan ogow: xisaabtan waxay ku saleysan tahay bixinta dhabta ah ee lambarka, kuma xirna celcelis ahaan sortie inta jeer, taas oo aan ognahay inay tahay hal mar 37kii wareejinba.
Waa maxay qiimaha wanaagsan ee tirada ay gaari karto kadib tiro cayiman oo wareeg ah oo wareega wareega ah oo wareegaya? Ama, maxay yihiin xadadka kala-sooc la'aanta?
Pelayo waxay soo saartay software si ay ugu ciyaarto ciyaar si kadis ah u dhacda, taas oo ah, iyada oo aan cilladaha rouletteku jirin, waxayna sameysay malaayiin si kadis ah.
Ka soo qaadashada jilitaanka wuxuu ogaaday inuu u baahan yahay ugu yaraan 2.000 oo jilitaan ah koox kasta oo lambar ah tixgeliyey, kordhinta kooxahan xilliyada 100 wareegyada markiiba.
Tusaale ahaan, kumbuyuutarka 1.000 wareegga, wuxuu ka baaraandegay wadar ahaan 2 milyan oo wareejin ah wuxuuna sidaas ku sameeyay goolal kasta oo wareeg ah. Aynu si taxadar leh u eegno jadwalka soo socda:
Haddii aan falanqeyno tan hore koox ka kooban 300, Waxaan u kuur galeynaa in wadarta “tosaska” (qiyamka ka sarreeyo heerka laga filayo wareegyada ee 36 wareeg), oo ah giraangir aan cillad lahayn, ay tahay celcelis ahaan qiyaastii +37 (tiirka labaad ee cad).
Tani waa sababaynta fudud ee la raaco: 300 kasta oo wareejin ah, lambar kasta waa inuu sixray ugu yaraan 300/36 = Waqtiyada 8,33 inaad noo ogolaato inaan ugu yaraan jabino xitaa lacagta.
Taas macnaheedu waxa weeye in tirooyinka la duubay 8 jeer ay naga dhigayaan kuwo wax yar lumiya kuwa 9 jeer la duubayna ay naga dhigayaan inaan wax ku guuleysano
Haddii lambar la duuduubo 14 jeer, way cadahay inay leedahay qiime togan oo ah 14 - 8,33 = 5,67 oo aan ku soo wareejin doonno +5.
Aynu u malayno in ka dib markii 300 la wareejiyay isla xaaladdu ay sidoo kale u dhacday lambarada kale ee 6, markaa waxaan heli doonnaa wadarta wadarta miiska oo u dhiganta: 5,67 + 5,67 + 5,67 + 5,67 + 5,67 + 5,67, 5,67+ XNUMX = 39,69.
Maaddaama tiro kale aysan ka soo bixin in ka badan 9 jeer, aan dhahno miiskan gaarka ah, ka dib 300 oo wareeg ah, waxaan leenahay wadar wanaagsan oo u dhigma + 39.
Jadwalka waxaan ka arki karnaa in miiska uu waxyar ka sareeyo gunnada la filayo ee miis aan cillad lahayn (wheel random), taasi waa + 37, laakiin sikastoo ay ahaataba qiimahani wuu ka fogyahay "Xaddid jilicsan”Kaas oo ka mid ah qorshaha, ee kala-wareegga 300 oo wareejin, waa + 46 (sadarka ugu horreeya ee cad).
Waa maxay "Xaddid jilicsan"? Waa qiimaha ugu badan ee togan Lama gaadhin 95% ee jilitaanka 2.000 ee koox kasta oo wareegaya.
Kaliya 5% soo hadhay ee imtixaanada ayaa ka gudbay xadkan, markaa waxaan dhihi karnaa way adagtahay in laga gudbo Xadka Jilicsan, maaddaama gawaarida bilaa cilladaha ay ku dhacaan oo keliya 5% waqtiga (1 jeer 20-kii).
Waa maxay "Xaddid adag"? Waa qiimaha ugu badan ee togan ee la gaadhay hal mar inta lagu gudajiray 2.000 oo jilitaan ee baloog kasta Waxay raacaysaa in suurtagalnimada in waxaani dhacayaa ay yihiin oo keliya 0,05% (1 jeer 2.000kiiba) waana qiimaha ugu fiican ee ay tahay inaan raadino.
Tusaalaha jadwalka hore, oo leh qiime wanaagsan + + 39, ma muujinayo wax gaar ah oo ku saabsan roulettekan; lambarrada qaar ayaa si fudud uga soo baxay kuwa kale, laakiin si weyn uguma filna.
Xaqiiqdii waxay ahaan laheyd mid xiiso leh hadii wadarta tirooyinka togan ay noqon laheyd + 50, sidii looga gudbi lahaa Xadka Jilicsan (+ 46), waxay naga dhigi laheyd inaan ka fikirno in miiska uu kusocdo jihada saxda ah.
Layaabka dhabta ah wuxuu ahaan lahaa tusaale ahaan, haddii qiimaha uu ahaan lahaa +64, kaasoo si cad u tilmaami lahaa jiritaanka miis leh dhab ahaantii xoog leexasho, taas oo noo oggolaaneysa inaan hubinno guulaha.
Markii la tijaabinayay 300-ka qaybood ee wareejinta, Pelayo ma uusan tixgelin suurtagalnimada in isla markiiba lala kulmo qiimayaashan, sida waxaad u baahan tahay wareejin badan tirakoobka la isku halleyn karo, marka la eego miiska ugu wanaagsan ee abid la helo (waxaan ugu yeeri doonnaa "A"), Iyada oo kaliya 300 wareega waxay ku gaadhay qiime wanaagsan oo u dhigma + 39.
Aan ku nasanno tusaalaheenna si aan si fiican u fahamno waxa uu yahay "miis".A","BTheC"(Sadarka saddexaad / afraad / shanaad ee shaxda cad).
Kala saar Roulette eex
Haddii aan diiwaangelinnay xog nagu filan (ugu yaraan 5.000 oo wareejin ah), waxaa laga soo ururiyey wixii aan hubno inuu waligiis ahaa miis isku mid ah, markaan la tashanno jadwalkii hore waxaan arki doonaa in celceliska qiimaha saxda ah ee roulette aan cillad lahayn ka dib 5.000 oo wareegyo ah uu ku saabsan yahay +109; haddii qiimuhu ka bato +143 (Xaddid jilicsan) waxaan la kulannaa wax xiisa leh oo haddii qiimaha uu ka bato +192 (Xaddid adag), waxaan joognaa miinada dhabta ah!
Tani waa waxa dhaca "A”, Taas oo markan kala diraysa dhammaan shakiga, markii laga gudbay'Xaddid adag, joogitaanka qaarkood ee cilladaha (dhicin).
Xaqiiqdii, waxaan leenahay wax ka badan 99,95% itimaalka in tirooyinka togan ay sii wadi doonaan kordhinta ka leexashadooda midka caadiga ah.
Qaar badan oo ka mid ah miisaska roulette-ka ee la soo saaray intii lagu jiray sahaminta Pelayo waxay ahaayeen nooca "B", oo leh qiime togan oo ah +153 (oo mar kale lagu soo qaaday muunad 5.000 wareeg ah), halka kuwii ugu xumaa (laakiin weli faa'iido leh) iyo cilado "yar" ay gaareen qiimaha + 135, had iyo jeer ku dhow qiyamka Xaddidnaanta Xaddidan (+143).
Pelayo ayaa bilaabay weerarka markii miisku ka batay Xadka Jilicsan, weli mid baa leh 95% hubaal in miiska loo eexday.
Xogtaas Pelayo waxay u maleysay inay xaqiiqdii u qalanto 5% waqtiga in qalad lagu sameeyo, maadaama uu dhaafay Xadka Jilicsan, kaliya 1 kiiba miiska kama leexan xagga'Xaddid adag, intaas ka dib, macquul maaha in qiimaha wanaagsan uu ku soo laabto Xadka Jilicsan: giraangir aan dhaafin'Xadka adag soo noqo!
Haddii sharadku, ka dib marka la dhaafo Xadka Jilicsan uu soo noqdo (1 jeer 20-kii jeer ee aan soo sheegnay), waxaan si fudud u joojineynaa miiskaas si kasta oo ay ahaataba wixii khasaaro ah si wanaagsan ayaa dib loogu soo celiyaa dhammaan waqtiyada kale ee aysan taasi dhicin. .
Haddii aan ka diiwaangashanay 10.000 wareeg oo miiska ah (diiwaangelintu waxay dhici kartaa waqtiyo kala duwan oo saacado ama maalmo ah, laakiin waa inaan marwalba hubinnaa 100% in tuuritaannada laga diiwaangeliyey isla miiska, iyada oo aan walxo walboo la beddelay ahayn, markaa waa inaan fiiro gaar ah u yeelo wixii faahfaahin ah ee jirka ah - xagashada, cilladaha - taas oo na hubinaysa arrintan), waxaan dhab ahaan u haynaa xog cad oo ku saabsan waxa ay na siin karto.
Xitaa haddii ay leedahay cillado aad u yar (nooca miiska "C"), in lagu weeraro faa'iido, gabi ahaanba waa inuu dhaaftay Xadka jilicsan oo ay gaareen ugu yaraan +195 (qiimaha lagu tilmaamo 10.000 wareeg).
Haddii aysan gaarin qiimayaashan, waxaa fiican inaad iska ilowdo miiskaas, maadaama aysan wax faa'iido ah u lahayn inay na siiso.
Markuu miis aan fiicnayn (Average Randal Wheel) gaaro oo dhaafo 30.000 wareeg, celceliskiisa caadiga ah iyo Soft Limit, bilaabo inuu diido oo farcanku wuxuu ku xidhan yahay inuu sii socdo halka, ka dib kumanaan kun oo wareegyo ah oo falanqeeyay, mar dambe ma jiri doonaan tiro leh qiimayaal wanaagsan, Faa'iidada gurigu waxay baabi'isay saameyn kasta oo leexasho togan oo ka timid qiimihii caadiga ahaa ee la filayay ee miiska cilad la'aanta ah.
Laakiin haddii jadwalku leeyahay cilado, lambarrada qaar ayaa ka gudbi doona qiyamka caadiga ah waana sii wadi doonaan sidaas.
Xitaa nooca "C" miiska ah ayaa dhaafi doona'Xaddid adag, iyada oo wali dammaanad laga helayo faa'iido nabdoon.
Haddii miisku yahay nooca "A", ka dib 30.000 wareejin waxay gaari doontaa wadarta saxda ah ee stratospheric + 966, taas oo aan macquul aheyn in laga diiwaangaliyo miis aan cillad lahayn, oo xadka ugu badan ee wadarta guud uu yahay oo kaliya + 294.
Haddaan wali caddayn, qiimaha +966 wuxuu lamid yahay faa iidada saafiga ah ee 966 lacag bixinood oo ah 36 cutub midkiiba, samee isku dhufashada oo arag inta ay la egtahay xagga bixinta iyada oo aan loo baahnayn wax horumar ah oo loo baahdo
Istaraatiijiyadda Pelayo ee ku saabsan sharadka Roulette eex
Markaan helno rooti dhaaftay'Xaddid adag, habka la raacayo waa mid fudud: waa inaad sharad ku dhigtaa lambar kasta oo wanaagsan.
Haddii kaliya Xadka jilicsan la dhaafay, waa inaan ku khamaarnaa oo keliya tirooyinkaas kuwa gaadhay qiimaha wanaagsan +8, si looga fogaado wanaagga beenta ah ee ka dhashay jaaniska saafiga ah.
Daraasada ku saabsan caadooyinka roulette ee leh cillado yar ama muuqda (Miisaska nooca "A", "B" iyo "C"), waxaa lagu sameeyay qalab kombuyuutar oo soo saaray dabeecad aad ugu eg tan miisaska dhabta ah, sidan oo kale Pelayo iyo qoyska (wuxuu ugu yeeray "markab-quusiyeyaasha" markii ay soo galeen hoolalka si ay u duubaan sii deynta) waxay awood u yeesheen inay muujiyaan heerka suurtagalka ah ee faa'iidada laga heli karo roulettes-ka la kormeeray.
Tusaale ahaan, iyadoo la tixgelinayo 1.000 wareeg, miis nooca "A" ah waa inuu keenaa wax u dhigma 30 nambar buuxa, miis nooca "B" ah ayaa mushaharku hoos ugu dhacayaa 20 buuxa, halka miis nooca "C" ah uu celcelis ahaan damaanad qaadayo a faa'iido net u dhiganta ku guuleysiga 12 buuxa.
Iyada oo ku saleysan qiimayaashan, Pelayo waxay ka shaqeysay saadaal guul oo ku dhow 70 milyan oo pesetas ah, taasoo lagu xaqiijiyay dhacdooyinkii dhabta ahaa ee ka dhacay Casino de Madrid intii lagu jiray xagaagii 1992.
Waa hagaag, ka dib aragtida ka dib aan u gudubno inaan ku dhaqmo: barnaamijkan roulette-ka ee khadka tooska ah waxaan doonayay inaan abuuro qalab, oo ka bilaabanaya isla caqligii si guul leh u qaatay Pelayo, wuxuu qaadan lahaa tallaabooyin taxane ah oo sifiican ula jaan qaada ciyaaraha maanta ee internetka.
Marka horeba, aan isla markiiba caddayno taas waa bot, taasi waa, barnaamij laftiisa laftiisa sharad ku galaya, markaa uma baahnid inaad gacanta ku duubto kumanaan iyo kumanaan wareegyo ah; haddii Pelayo uu heli lahaa tiknoolajiyaddan iyo casinos-ka internetka ee la heli karo 20 sano ka hor, waxay u badan tahay inuu noqon lahaa bilyaneer.
Kaliya ka fikir kharashka safarka ee qoyska oo dhan, saacadaha aad ku qaadatay duubista waxay muujineysaa qarsoodi, walwalka ku saabsan sharadka miiska ay dadka ku badan yihiin dhamaadka usbuuca, marka la soo koobo, runti maahan shaqo aan la bixin, laakiin waxay ahayd shaqo ahaan. .
Marka laga eego aragtidan bot waa saaxiibka saxda ah, hadda waxaad ka heli kartaa raadadka bootooyinka maalinlaha ah ee fiidiyowyada YouTube-ka, halkaas oo aad ka arki karto tusaalooyinka barnaamijyada wanaagsan, dhibaatadu waxay tahay in, si kastaba ha noqotee, marar badan oo aan furo fiidiyowyo halkaas oo aan ku arko bots oo ku sharraxan roulettes-ka software-ka, taas oo qeexitaankeedu aanu ahayn roulettes dhab ah, laakiin raaca caqliga mashiinnada ciyaarta.
Haddii aadan haysan nidaam guuleysasho, bot wuxuu kaliya u adeegaa inuu otomaatiiyo qasaaraha, liddi ku ah haddii aad leedahay nidaam guuleysta, bot waa aaladda ugu habboon, maxaa yeelay ma laha kharashyo maamul, ma daasho, ma isku buuqsan, waa inaanu waligiis musqusha gelin, waa mid jilicsan oo naxariis daran xitaa markaan seexanno si farxad leh.
Sidee u aragtaa Roulette Bias Sniper (Bet maskaxda)
Qaabka sharadku wuxuu ku saleysan yahay gebi ahaanba habka asalka ah ee Pelayo, kaas oo aan rajeynayo inaysan shaki ku jirin xilligan inay tahay runti 100% guul farsamo; marka maxaa dhulka u badalay?
Dhab ahaantii, marwalba iyo kadib waxaan u maleynayaa: laakiin haddii qaabkan guuleysta si faahfaahsan loogu sharraxay khadka tooska ah sannado badan, muxuu qofna u dhisi waayey boosto kahor? Maxaan ugu sii daawanayaa bots kali ah oo laba jibbaar ku ciyaaraya software-ka software-ka ama iskudayaya in la saadaaliyo dabeecaddiisa kala-guurka iyadoo la adeegsanayo algorithm khayaali ah? Miyay noqon kartaa in ciddii samaysay ay u xajisato (si sax ah) naftooda oo keliya? Mise xisaab ahaan baa hubaal in dhammaan qadka internetka aan la eexan karin?
Waxaan kuu sheegayaa ra'yigayga ku saabsan mowduuca: roulettes internetka eex leh ayaa jira, kaliya oo leh habka wax soo saarka ee maanta la qaatay (hal-qayb), waxay qaadataa waqti dheer ka hor cillad (si kastaba ha noqotee wax yar) ayaa is muujin kara, xitaa haddii xitaa roulette uusan ahayn cilladaysan, xitaa u janjeedh yar oo miiska ayaa ku filan in lagu abuuro cillado inta jeer ee tirooyinka.
Marka labaad, casinos-ka khadka tooska ah waxay sidoo kale kormeeraan wax-soo-saarka giraangiraha roulette-ka waxayna sidoo kale ogaadaan haddii wax khaldan yihiin, laakiin waqtigan waxay leeyihiin 2 fursado: midkoodna isla markiiba waxay ku beddelaan qaybta cilladda leh kharashyo badan (maxaa yeelay haddii ay yihiin hal-qayb, 'Giraanta kala-soocayaasha oo kaliya sanduuqa keliya), ama waxba kama qabtaan, ugu yaraan illaa ay ogaadaan in qof uu guuleysanayo wax ka badan inta ay ku kici lahayd inay beddelaan qaybta cilladaysan. Maxaad sameyn laheyd halkii miiska lagaa saari lahaa?
Inta udhaxeysa labada fursadood waxaa jira waqti si fiican loo qeexay, oo ah waqtiga ka soo gudbaya marka eexashada roulette ay soo baxdo marka ganacsaduhu ogaado.
Waqtigan ayaa ku habboon Roulette Bias Sniper, sida isbadalada yar ee la taaban karo ee aan ku sameeyay aragtida asalka ah ee Pelayo, wuxuu isku dayaa inuu cadeeyo cilladaha (wax yar ama iska cad) isla markiiba wuxuu bilaabayaa inuu ka faa'iideysto ciyaaryahanka, xitaa hadii uu shaqeynayo, hurdo ama wax walba uu sameynayo intii aad ku eegi lahayd shaashad kubbad wareegaysa.
Ikhtiyaarrada raadraaca khadka tooska ah ee leh Roulette Bias Sniper
Waxaan rabaa inaan isla markaaba ku xaqiijiyo hal shay: isticmaalka bot bot this waa mid aad u fudud.
DIGNIIN! laga soo qaatay nooca 8 Roulette Bias Sniper wuxuu adeegsadaa mishiinka cusub ee garashada garaafka Screen Capture Engine lagu soo dejisan karaa bilaash at link. Marka waa inaad isticmaashaa labada barnaamij isla waqtigaas.
Sidaan horeyba halkaa ugu sheegnayIstaraatijiyad aasaasi ah waa tan uu ku tilmaamay Pelayo iyo qoraalkan waxaan ku sharixi doonaa oo kaliya astaamaha ugu muhiimsan barnaamijka, ee qaabeynta iyo sharaxaadda faahfaahsan ee xulashooyinka ciyaarta ee aan doorbido samee fiidiyowyo cayiman oo ku daabac on Kanaalka Youtube di ThatsLuck, Sidaa darteed waxaan kugula talinayaa inaad is-qorto oo aad dhaqaajiso ogeysiisyada haddii aad rabto inaad la socodsiiso waxyaabaha ku saabsan daabacaadaha hubaal ah inay raaci doonaan.
Fursadaha ugu Muhiimsan ee Roulette Bias Sniper
Registration Diiwaangelinta otomaatiga ah ee lambarrada tagaya.
Kaydinta otomaatiga ah ee wareejinta faylka qoraalka (aad waxtar badan u leh haddii PC shil dhaco, koronto la'aan dhaqso ah, iwm).
Suurtagalnimada dami si toos ah kombiyuutarka markuu gaaro mid Jooji Guusha ama midkood Stop Loss.
Ility Awood u lahaanshaha booska hore si aad u ilaaliso daaqadda casino shaashad buuxda (kor ka joog).
Ility Awood u lahaanshaha daaqadda casino ee dhinaca hore si aan waligeed u daboolin popups ama xayaysiisyada kale ee casino.
Suurtagalnimada wax qabad dhawaaji lagu hagaajin karo wareeg kasta oo guuleysta.
Ility Awood u lahaanshaha aragtida bot ee qaabka mini, taasi waa, daaqada bot-ka waxaa loo yareeyay dherer kasta baahi kasta oo loo qabo in lagu meeleeyo shaashadaha yaryar.
Awood u lahaanshaha go'aaminta ka dib inta jeer ee la duubo tirooyinka tirooyinka togan isla markaana khamaar kasta waa inuu bilaabmaa (tusaale ahaan miisaska Pelayo waxay ka bilaabmayaan 300 wareeg).
Ility Awood u lahaanshaha go'aaminta inta cutubyo lambar sharad.
Awood u leh isticmaalka bot-ka kaliya in la duubo wareejin iyada oo aan waligaa la tilmaamin (waxtar ayey u leedahay kuwa adeegsada habab kale oo raba in ay abuuraan arji urursi ujeeddooyin kale), tan awgeed waa ku filan tahay in '0' la dhigo qaybta unugyada loogu talagalay hal lambar.
Ility Awood u leh dejinta qiimaha togan ee lambarada in la sharaddo: habka asalka ahi waa in sharad lagu sameeyo lambarrada iyadoo leh qiime togan ugu yaraan +8 marka aad dhaafto Soft Limit iyo dhamaan nambarada togan hadii aad dhaafto Xadka adag.
Ption Xulasho Gaashaanka Bet: si aad u ilaaliso guuleysigaaga marka Xadka Jilicsan la dhaafo (maxaa yeelay 5% kiisaska qiimaha ayaa dhici kara), waxaad dejin kartaa heer, haddii PV + miiska uu bilaabmayo inuu yaraado (had iyo jeer ka sii hooseeya Xadka Jilicsan), bot laakiin si kastaba ha ahaatee, wuxuu joojiyaa sharadka. Si tan loo sameeyo bot ayaa duubaysa PV-ka ugu badan ee miiska (PVMax) markay korayaan oo ay isbarbar dhigayaan Soft Limit iyo qiimaha PV +. Fiidiyowga YouTube-ka waxaan si faahfaahsan ugu sharxi doonaa doorashadan muhiimka ah.
Ility Kartida aad u leedahay inaad ku eegto qeybinta sharadyada roulette iyo a jaantuska bixinta, oo muujinaysa itimaalka tirakoobka (Eexashada Tijaabada%) joogitaanka dhabta ah eex ee loo xisaabiyo iyadoo lagu saleynayo tirada hits lagu guuleystay ee la xiriirta xaddiga tirooyinka sharad kasta oo wareega ah.
Fursadaha kale ee Roulette Bias Sniper
Ets Khamaarista anti-Log-Off: khamaarka bot wuxuu kaliya kudhacayaa hal cutub oo gaduud ah iyo mid madow (marka waxaad lumineysaa oo kaliya hadii eber yimaado) wadar walba wuu wareegayaa marka aysan jirin sharad dhab ah oo la sameeyo Tani waxay ka hortageysaa in laga jaro miiska ciyaarta, xitaa haddii ay soo saarto kharash xadidan oo diiwaangelinta ah (hoos ka akhriso sida loo xisaabin karo). Bedel ahaan inaad ku sharraxdo ugu yaraan casaanka iyo madow, waxaad sidoo kale ku sharxi kartaa hab aan kala sooc lahayn oo keliya casaanka ama madow keliya; mustaqbalka fog kharashku waa isku mid (runti, runti wuxuu badbaadinayaa dhawr euro), laakiin ugu yaraan khamaarka ma fahmayo in tirooyinka si cad loo duubay.
Scheme Nidaamka isbarbardhiga (latashiga) inta udhaxeysa xisaabinta ay sameysay bot iyo jadwalka asalka ah ee lagu sharaxay Pelayo. Mid ka mid ah waxyaabaha gaarka ah ee Roulette Bias Sniper waa in la xisaabiyo oo la isbarbardhigo Xadka Jilicsan iyo Qiimaha Wanaagsan ee miiska, wuxuu sameeyaa 2.000 oo jaanis ah oo aan kala sooc lahayn marwalba oo wareeg ah, Sidan ayaad ku haysataa xaalada lagu xakameynayo marxalad kasta oo ciyaarta ah oo aadan ku jirin baloogyo 500 wareeg ah sida ku dhacda miisaska Pelayo mar haddii 5000 wareegyada la dhaafay. Jadwalka barnaamijka (Jadwalka Tixraaca EexdaWaxaan galiyay tiirar yar oo eex ah (eex fudud) taas oo run ahaantii u dhiganta miiska Pelayo ee la xiriira Nooca "C" (akhri qaybta koowaad ee boostada wixii macluumaad ah).
Sawirka hoose waxaad ku arki kartaa inaan joogno 1.500 duuban oo la duubay (dhibco cagaaran oo horay usocda), oo leh qiime miis ah oo +73 ah iyo Xaddid Xaddidan oo ay soo saartay bot + +92, oo si sax ah ula mid ah tii asalka ahayd ee Pelayo jadwalka (Soft Limit sadarka labaad ee jadwalka) kaas oo ah +92. Sida iska cad waa iska cadahay in aysan wali (weli) shuruudaha sharadka shaaggan lagu xallin.
U soo dir e-mayl warbixin faahfaahsan oo ku saabsan heerka VP + ee miiska, qasnajiga, iwm. Ikhtiyaarkan ku habboon wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku hesho emayl (xitaa taleefankaaga casriga ah Sidaa darteed) dhowr daqiiqo ama saacad kasta, sidaa darteed xitaa haddii aadan guriga joogin ama aad wax kale qabanayso, waxaad mar walba hubin kartaa xaaladda diiwaangelinta iyo diiwaanka lacagta. Waxa kale oo suurtagal ah in la waydiiyo farriin e-mayl in la soo diro ka hor inta PC-ga la dansan (Ikhtiyaarka ShutDown) Markaad gaarto Stop Win ama Stop Loss oo ku taal qaybta ciyaarta ugu weyn.
► Raadinta Xisaabiyaha Qiimaha: intee in le'eg ayey nagu kacaysaa inaan isku diiwaan galino 7.000 oo wareeg ah Roulette Bias Sniper si giraangiraha loo yaqaan 'roulette' halkaasoo sharadka ugu yar ee casaanka / madow yahay 20 senti? Thanks to doorashadan waxaad awood u yeelan doontaa inaad fikrad ka hesho kharashyada maaraynta diiwaangelinta. Kaliya gal sharadka ugu hooseeya ee duurka, mid kasta oo meeqa meelood oo aan sharad lahayn bot waa inuu ku sharfo casaanka / madow (bareeg sharad) iyo tirada wareegyada aad damacsan tahay inaad isdiiwaangaliso. Kadib riix batoonka Calc waxaan heleynaa natiijada, taas oo kiiskan noqon doonta ku dhowaad 15 euro.
01. Immisa lambar ayaa sharad lagu dhigayaa Roulette Bias Sniper markasta oo wareeg ah? Waxay kuxirantahay, marka Xadka Jilicsan la dhaafo, bot wuxuu ku bilaabaa sharad dhamaan nambarada qiime PV + ka weyn 8 ama inaad adigu go'aamiso (sharciga Pelayo waa +8). Imtixaannadii ilaa hadda la qaaday, bot wuxuu sharad ku galay illaa 7 lambar halkii wareejin. Sida iska cad haddii Xadka adag laga badiyo (eexda hubaal) way sharad galaan dhammaan lambarrada leh PV + ka weyn 0 (yacni dhammaan wanaagga) oo xitaa noqon kara 13 ama 14.
02. Waa maxay bankroll-ka uu ciyaartoyga haysto? Tan waxaan ku tiirsanahay tilmaamaha cad ee Pelayo laftiisa: 1.000 unug waa kuwa ugu yar ee wajihi kara wejiyada kala duwanaanshaha xun xitaa haddii ay jirto jiritaan dhab ah eexasho. Tani waxay ka dhigan tahay in haddii jadwalka ugu yar ee tirada lambarada uu yahay 0,20 sidoo kale waxaad ku bilaabi kartaa a raasumaalka bilowga ah ee € 200. Marka bankrollku gaaro € 400 waxaad u gudubtaa inaad ku sharraxdo 2 cutub oo ah 0,20 halkii buuxa (40 senti) iyo wixii la mid ah si aad kor ugu kacdo.
Table03. Miis aan isdiiwaangaliyay wuxuu dhaafay Xadka Jilicsan, laakiin kadib markii dhowr boqol oo wareeg ah qiimaha PV + uu caadi kusoo laabtay, waayo? Haddii aad si taxaddar leh u akhriday qaybta hore ee boostada, waxaad ogaan doontaa in Pelayo laftiisu uu sheegay in miis aan cillad lahayn uu ka badnaan karo Xadka Jilicsan 5% kiisaska. Si kastaba ha noqotee, haddii qiimaha uu ka hooseeyo Xadka jilicsan, macnaheedu waa in xaalad kasta ay jirto waji isbeddel aad u xoog badan oo tirooyinka qaarkood ah, weji leh taxaddarrada la geliyay bot (Xulashada Bet Shield), Weli way hoggaamin karaan faa'iido aad u fiican ciyaaryahanka.
04. Immisa wareeg ah ayaan sameeyaa si aan u duubo si aan u fahmo haddii eex jirto iyo in kale? Uguyaraan 7.000, runti hadaad miiska fiiriso Jadwalka Tixraaca Eexda waxaad ogaan doontaa in aan galiyay dhibic cas midig dhan 7.000 oo wareeg ah. Tani waa sababta oo ah markay 7.000 wareegaan qiimaha Soft Limit iyo Feejignaanta Yareysa (eex yar) ayaa ku beegan (+160), sidaa darteed haddii aysan jirin xitaa "wax yar" eexasho PV + qiimaha miiska ayaa ka sii hooseeya xadkaan, haddii kale markay tahay 7.000 wareeg waa inay qasab tahay inay bilawdo inay ka kor marto Xadka Jilicsan (eeg qiyamka 7.500 oo wareegyo ah, halkaasoo qiimaha Sicirka Fudud uu bilaabayo inuu si aan macquul ahayn kor ugu kaco marka loo eego Xadka Jilicsan)
.I05 Waan isticmaali karaa Roulette Bias Sniper roulettes-ka hawada ku shaqeeya? Xaqiiqdii maya, waad lumineysaa. Shuruudda lagama maarmaanka ah waa in uu jiro qof bini-aadam ah oo tuuraya kubbadda, sidaas oo kale ka mamnuuc kuwa giraangiraha been-abuurka ah ee been abuurka ah halkaas oo ay jiraan nooc ka mid ah soo-jeediyaha si uu u sharraxo ciyaarta, laakiin kubbadda ayaa weli bilaabeysa iyada lafteeda ama adigoo riixaya badhanno qalaad.
06. Ma sare u qaadi karaa sharadkeyga inta aan ciyaarayo haddii aan guuleysto? Waad awoodaa, laakiin maya. Xitaa haddii aad ku guuleysatid adigoo sharad ku furaya 1 € lambar kasta iyo xitaa haddii routerku runti u xaglinayo, waxay ku bilaabi kartaa kala duwanaansho diidmo ah sida in lagu shubo lacagta oo dhan, ka dibna waxaa laga yaabaa inaad ku darto xaqiiqda ah in VP + miiska uu hoos yimaado Soft Xaddid maxaa yeelay waxaad ku jirtaa 5% kiisaska aan kor ku soo xusnay (way dhici doontaa) waxyeeladuna waa mid aan laga soo kaban karin! Qiimaha sharadka ugufiican waa inuu la mid noqdaa bankrollka oo loo qaybiyay 1.000 (eeg su'aalaha inta badan la weyddiiyo)
07.Ma u isticmaali karaa bot-ka wax ka badan hal pc? Haa, haddii aad ku haysato wax ka badan hal PC guriga, si fudud ayaad u samayn kartaa, runti waxaan kugula talinayaa inaad si toos ah uga maamusho furaha USB, markaa haddii loo baahdo waxaad gelisaa iyada oo ku saleysan PC-ga aad rabto inaad isticmaasho ama sida aad u go'aansato inaad maamul xarumahaaga kormeerka ee internetka.
08.Sidee baa khamaaristu u dhacdaa? Xitaa cufnaan mise horumar? Had iyo jeer oo keliya isla'eg. Haddii ay jirto faa'iido gaar ah, xitaa tiro waa xalka ugu walaaca yar (Pelayo sidoo kale sidan ayuu u ciyaaray), xitaa haddii waqti ka dib aad si fudud u kordhin karto qiimaha cutubka sharadka (eeg Su'aalaha la Weydiiyo n.2 iyo n.6).
09.Sidee loo qaabeeyaa Roulette Bias Sniper? Way adagtahay in la isticmaalo? Si loo fahmo sida bot ay u shaqeyso, waa ku filan in la fahmo habka asalka ah ee Pelayo ee lagu sharaxay bilowga boostada, marka aad ogaato inay fududaan doonto in la fahmo wax kasta oo kale. Ku saabsan ►Kanaalka Youtube di ThatsLuck waxaad ka heli doontaa fiidiyow gaar ah oo loogu talagalay dejinta mashiinka qabashada ►Screen Capture Engine iyo mid gaar ah oo loogu talagalay isticmaalka Roulette Bias Sniper.
The 10. Miyuu botku ka shaqeeyaa dhammaan casinos-ka internetka? Qaybta khiyaanada ah ee barnaamijku waxay ahayd si sax ah in lagu ogaado lambarada lagu sii daayay shaashadda. Fiidiyowga ku saabsan dejinta waxaan ku sharxi doonaa wax walba, si kastaba ha noqotee bot ayaa ku mahadsan kan cusub ►Screen Capture Engine ogaadaa waxa ay ku aragto shaashadda isla markaana aan sinnaba ula macaamilin koodhka barnaamijka ee bogagga shabakadda casino. Dhinaca kale, tani waxay ka dhigan tahay in dejintu bilowgeedu ay tahay waxoogaa caajis ah (oo kaliya hal jeer ayaa la sameeyaa halkii casino), laakiin dhinaca kale casino ma xannibi karo raadraaca, waxaan adeegsanayay farsamadan tan iyo 2012 aniga oo aan waligey wax dhibaato ah qabin.
11. Laakiin miyuu botani runtii ku guuleystaa roulette? Haddii roulette xitaa leeyahay eex yar dabcan HAA 100%, haddii kale waxaad waayi doontaa qaddarka la maalgeliyey si aad u duubto wareegyada (fiiri ikhtiyaarka Qiimaha Xisaabiyaha Qiimeynta). Kadibna waxaa jira xaalado marka roulette diiwaan gelinayo eex ka iman kara inta jeer ee xoog leh ee tirooyinka qaarkood, xaaladdan oo kale waxaad sidoo kale ku guuleysan kartaa guulo wanaagsan, waxa muhiimka ah waa in la fahmo waqtiga marka leexashada tirooyinka ay soo noqonayaan oo la joojinayo (StopWin) ka hor intaan la guuleysan guulaha (dhinaca ay maamusho Xulashada Bet Shield).
►12. Fiidiyowyada YouTube-ka kujira waxaan ku arkay in deriska nambarada sharadka ay soo baxaan badanaa, suurta gal ma tahay in kuwaa sidoo kale lagu sharfo? Maya, maxaa yeelay haddii ay runti jirto eex, roulette ayaa kaliya bilaabi doonta soo saarista guulo nambarro gaar ah, kuwa kale waxay la soo bixi doonaan isweydaarsigooda caadiga ah, iyaga oo aan wax faa'iido ah noo keenin muddada dheer.
► 13. Ma jirtaa istiraatiijiyad lagu taliyay? Dabcan, haddii aadan rabin inaad wax khatar ah gasho, waad sameyn kartaa sidan: maal gasho inta lagaa filayo inaad iska diiwaangeliso 7.000 wareeg. Marka tan la dhammeeyo, waxaad yeelan doontaa fikrad gaar ah oo ku saabsan in rouletteku uu eexanayo iyo in kale ugu dambayntiina waxaad bilaabi kartaa sharad. Si tan loo sameeyo, kaliya geli qiimaha "0" berrinka Cutubyada Sharadka oo si dulqaad leh u sug dhamaadka diiwaangelinta, oo waliba dhici karta dhowr maalmood oo kala duwan, illaa iyo inta roodhistu had iyo jeer isku mid tahay. Haddii, liddi ku ah, aad doorbideyso ficilka, ka tag qiimaha "1" berrinnada Cutubyada oo hubi xaaladda jidka loo marayo 7.000 wareegga, mararka qaarkood waxaa dhici doonta in la bilaabo sharad horeyba dhowr boqol oo wareeg ah haddii PV + shaxdu waxay dhaaftay Xadka Jilicsan.
.14. Sidee lagu helaa Roulette Bias Sniper? Waxaad kala soo bixi kartaa barnaamijka isla markiiba bogga hoose. Markaad aragto fiidiyowyada kujira Kanaalka Youtube oo bartay dhammaan howlaha ugu muhiimsan, waxaad ka iibsan kartaa buug-gacmeedka 'Amazon', kaas oo aad ka heli doonto lambarka hawlgelinta.
Hagaag, kahor intaadan soodajin Roulette Bias Sniper khadadka hoose, xusuusnow tani waa mid qalab ogaanshaha ciyaarta ee roulette iyo sida oo kale, si looga faa'iidaysto kartideeda ugu badnaan, waa in si buuxda loogu fahmaa hawlgalkeeda, xitaa haddii markaa ay ku filan tahay in si fudud loo gujiyo si loo kiciyo.
Soo Degso Fayl	RBSniper8.zip - 4 MB